iTunes ho an'ny Windows 10 - Ahoana ny fomba fampidinana sy fampiasana? - Ahoana No
Ahoana ny fomba fampidinana iTunes amin'ny Windows 10?
Mpankafy be an'i Apple ve ianao, ireo fitaovana marani-tsaina, ary programa momba ny rindrambaiko? Raha eny dia miharihary ny antony. Apple dia iray amin'ireo marika fahombiazana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary gaga be foana tamin'ireo fonosana rindrambaiko, anisan'izany ny iTunes. Izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra hijerena fialamboly am-peo sy horonantsary manerana an'izao tontolo izao. iTunes dia manana ny fisian'izy ireo amin'ny telefaona paoma, iPods, Macs. Ary ny zavatra tena mahaliana indrindra dia ny fisian'ny iTunes ho an'ny Windows 10 PC.
iTunes dia manana fonosana sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra ary hira ary zavatra hafa mifandraika amin'ny tontolon'ny fialamboly. Io no sehatra tsara indrindra ahafahanao manaraka ireo mpanakanto tianao indrindra ary hahita ireo famoahana farany. Ary ankehitriny, azonao atao ny mankafy ny mpanakanto tianao indrindra na ny sarimihetsika amin'ny sary tsara kalitao sy ny kalitaon'ny feo avo na dia amin'ny Pc misy ny varavarankely 10 napetraka aza.
Raha midina miaraka amin'ny lahatsoratray ianao dia ho fantatrao, ny antony tokony handinihanao ny fisintomana iTunes, ary ny fomba fampidinana sy fampiasana azy amin'ny fomba mora indrindra.
Mitady iTunes Alternatives ? Zahao avy ao amin'ny faritra bilaoginay.
Maninona no mifidy iTunes ho an'ny Windows 10 PC?
Tsy isalasalana fa mampiasa ny varavarankely tsara indrindra ianao fa ny tsy ampy dia ny rindrambaiko afaka manome anao ny famakiam-boky feno fialamboly kilasika sy maoderina amin'ny alàlan'ny tsindry haingana. Ny fisafidianana iTunes dia mety ho fanapahan-kevitra tsara indrindra raisinao amin'ny fotoana fialambolinao. Ireto misy sasany manasongadina azy izay hanampy anao hahafantatra ny antony tokony hahazoanao iTunes ho an'ny Windows 10 PC.
Mahatonga anao hanary ireo fonosana CD izay tsy maintsy nentinao teo aloha.
Izy io dia manana ny karazan-kira rehetra, mozika, seho ary sarimihetsika amin'ny tsindry iray monja.
Ny sariny dia manana kalitao avo lenta izay manampy anao hitazona faritra milamina kokoa sy milamina kokoa eo am-pijerena sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra.
Ny fanangonana hira, sarimihetsika ary fandaharana amin'ny fahitalavitra dia tena malalaka sy midadasika.
Ny fiasa amin'ny tranomboky dia tena mahaliana izay ahafahanao mijery ny fanangonana ataon'ny mpanakanto, fizarana na rakikira. Mahatonga haingana ny fikarohana anao io.
Izy io dia afaka manafatra mozika avy amin'ny CD.
Fikambanana manaitra amin'ny fanaingoana ny lisitry ny playlist.
Izy io dia manana fifehezana amin'ny efijery izay ahafahanao milalao horonantsary mozika.
Mandrindra ny atiny amin'ny fitaovanao.
Ireo endri-javatra folo rehetra dia maharesy lahatra ireo mpampiasa teknolojia fa iTunes no mety ho safidy tsara indrindra handefasana sy hankafizanao fialamboly am-peo sy horonan-tsary.
Dingana hahazoana iTunes ho an'ny Windows 10 PC:
Ankoatry ny zava-misy fa mahavariana tokoa iTunes ampiasaina ary mahasoa ny mpampiasa azy amin'ny fividianana sy fisintomana ireo hira, fandaharana amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika ary podcast tiany indrindra ao anatin'ny minitra vitsy, dia manolotra fomba mora indrindra hisintomana sy hampiasana azy io na eo amin'ny windows 10 pc aza .Misy dingana mora 8 hampidinana ity rindrambaiko iTunes mahavariana ity ho an'ny windows 10 pc.
Mandrosoa ny tranonkala -Miankina amin'ny fahafaham-ponao sy ny laharam-pahamehanao lohalaharana ny dingana voalohany tokony hataonao dia ny mandefa ny tranokala tianao indrindra amin'ny solosainao.
Mizaha amin'ny tranokala -Mba hahatratrarana ny rindrambaiko iTunes, aorian'ny fandefasana ny browser tianao indrindra, dia mila mizaha ny tranokala Apple iTunes ianao www.apple.com/itunes/download .
Tsindrio ny 'Download Now' -Aorian'ny fitetezana ny tranokala dia mety mila mikorisa kely ianao ary avy eo dia tsindrio ny 'Download Now' mba handrisihana ny fizotran'ny rindrambaiko iTunes tianao indrindra.
Tsindrio ny 'Save' -Rehefa avy tsindrio ny fisintomana ianao izao dia homena safidy 'Save'. Tsindrio eo raha hanohy ny fizotry ny fisintomana.
Tsindrio ny 'Run' -Tsotra ihany ny misintona. Aorian'izany dia tsindrio ny 'Save', iTunes dia alaina ao anatin'ny minitra vitsy ary hanome anao ny safidy 'Run'. Tsindrio eo raha hampandeha ilay rindrambaiko amin'ny solosainao.
Tsindrio ny 'Next' -Aorian'ny fipihana ny 'Run' dia mila tsindrio 'Next' ianao hanohizana ny fizotrany.
Tsindrio ny 'Install' -Rehefa avy tsindrio ny 'Next' dia omena safidy ianao hanindry ny 'Install'. Kitiho eo rehefa afa-po tanteraka amin'ny fizotran'ny fametrahana ianao.
Tsindrio ny 'Finish' -Ity no dingana farany tokony hataonao mba hamenoana ny fizotry ny fisintomana / fametrahana. Tsindrio ny 'Vitao' mba hamaranana ny fizotry ny fametrahana.
Ankehitriny, rehefa vitanao ny dingana rehetra takiana amin'ny fisintomana iTunes ho an'ny Windows 10 pc dia azonao atao izao ny mankafy ny fisintomana ireo hira tianao, fandaharana amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika sns. Fa miandry! Ahoana ny fampiasana. Manahy momba ny fomba hahafantaranao mampiasa iTunes amin'ny windows 10 anao ve ianao? Aza manahy fa hanome anao torolàlana iray tsikelikely amin'ny fomba fampiasana iTunes ho an'ny Windows 10 pc izahay.
Ahoana ny fampiasana iTunes amin'ny Windows?
Araho ity torolàlana tsikelikely ity hahalalana ny fomba fampiasanao iTunes amin'ny windows 10 anao.
Mamorona ID Apple:
Mba hanombohana mampiasa iTunes amin'ny solosainao dia mila mamorona id Apple ianao aloha. Tokony hanaraka ireto dingana manaraka ireto ianao hamoronana id an'ny paoma.
Mandrosoa iTunes amin'ny biraonao ary kitiho ny 'Account'
Tsindrio ny 'Mamorona ID Apple vaovao' ary kitiho ny 'Tohizo'
Manaiky ny hoe 'Namaky sy nanaiky ireo fepetra sy fepetra ireo aho'
Soraty ny adiresy mailakao, tenimiafinao (soraty indray hanamarinana)
Misafidiana fanontaniana sy valiny fiarovana (in-3)
Safidio ny andro, volana, taona ary kitiho tohizo
Tsindrio ny fomba fandoavam-bola ary ampio ny laharan'ny karatra (fenoy feno ny antsipiriany rehetra)
Soraty ny tanànanao, faritany, adiresy paositra, nomeraon-telefaona
Tsindrio ny 'Mamorona Apple ID'
Tsindrio 'OK' mba hamita ny fomba.
Omeo alàlana ny solosainao ao amin'ny iTunes ho an'ny Windows 10:
Mandrosoa iTunes avy amin'ny biraonao ary kitiho ny 'Account'
Tsindrio 'Autorisation' ary ny: 'Avelao ity solosaina ity'
Soraty ny teny miafinao ary kitiho ny ‘Manome alalana”
Hatsarao ny trano famakiam-baovaonao ao amin'ny iTunes ho an'ny PC Windows 10:
Mandrosoa iTunes avy amin'ny biraonao ary kitiho ny 'File'
Ampio rakitra ao amin'ny tranomboky
Tsindrio ilay rakitra na fampirimana tianao ampidirina amin'ny iTunes.
Avereno imbetsaka ny fizotran'ny rakitra na lahatahiry tianao hampidirina ao amin'ny iTunes.
Mividiana atiny amin'ny iTunes:
Ny dingana farany dia ny mividy ny atiny tianao indrindra amin'ny rindrambaiko iTunes.
Mandrosoa iTunes avy amin'ny Desktop ary kitiho ny 'Store'
Tsindrio ny sarany 'Vidiny' amin'ilay entana tianao hovidiana
Soraty ny teny miafinao ary kitiho ny fividianana.
Azonao atao ny mividy ny safidinao betsaka ary hahita ny tsirairay amin'izy ireo ao amin'ny tranombokinao rehefa vita ny fividiananao.
Ankehitriny ianao dia manana torolàlana tsikelikely handefasana sy hampiasanao ny rindrambaiko iTunes mahavariana indrindra, araho ireto dingana tsotra ireto ary ankafizo ireo hira tianao, fandaharana amin'ny fahitalavitra ary sarimihetsika tianao amin'ny alàlan'ny iTunes eo amin'ny varavarankely 10 PC. Miaraka amin'ny iTunes ao amin'ny Windows 10 PC anao, ny fotoananao dia ho feno fahafinaretana, fialan-tsasatra ary fifaliana. Ataovy fampidirina amin'ny iTunes ny PC-nao ary tsy hanenenanao mihitsy ny fanapahan-kevitrao.
Amboary ny iPhone tsy afaka mifandray amin'ny iTunes
iMovie Alternatives ho an'ny Windows 10
Rehefa ho avy ny vanim-potoana faha-3 Aashram: datin'ny famoahana sy faminaniana fanavaozana!
Haleloia Tsy Misy Ny Fiainana Ny Indian Actress
video youtube miova ho mp3
izay miaraka amin'ny YouTube dieny izao
lalao maimaim-poana amin'ny Internet hilalao tsy misintona mpilalao flash
ny fomba ahazoana kaonty mpianatra praiminisitra
mijery stream tv amin'ny Internet maimaim-poana
ohatrinona ny vidin'ny robux 1
tranokala tsara handefasana sarimihetsika